महाधिवेशनको भीडमा बेपत्ता छोराहरू खोजिरहेका भीमबहादुर… – हाम्रो देश
रमेश लम्साल, काठमाडौँ, १३ पुस : झापाका भीमबहादुर बस्नेतले जीवनको सात दशकको यात्रामा अनेकन हण्डर ठक्कर व्यहोर्नुभयो । जीवन व्यवहार सिक्नुभयो । तर, कहिल्यै निराश भने हुनु परेन । पाँच भाइ छोरा जन्मँदा उहाँलाई संसारकै सबैभन्दा बढी खुशी मिलेको थियो । किनकि, प्रकृतिको वरदानरुपी सन्तान कुनचाहिँ बाबुलाई घटीबढी लाग्ला र ?
दाइ र भाइले रोजेको मुक्तिको बाटोमा नै हिँडिरहनुभएका सुरेन्द्र र वीरेन्द्रसँगै पिता भीमबहादुरको एउटै आश छ माओवादी माओवादी नै रहिरहोस् । जनताको अग्रदस्ता बनिरहोस् । परिवर्तनको एजेण्डा बनिरहोस् । जनताको जीवनस्तरमा पनि परिवर्तन ल्याओस् । आठौँ महाधिवेशनले त्यही दिशानिर्देश गरोस् । के भीमबहादुरहरूजस्तै छोराछोरी बेपत्ता पारिएका मातापिताले कहिलेसम्म आँशु पिएर बाँच्नुपर्ने हो ? माओवादी नेतृत्वले कहिले देला चित्तबुझ्दो जवाफ ? सवाल जति महत्वपूर्ण छ जवाफ पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण छ ।-रासस